Residential and Commercial Painting Services in Myanmar - Colorful Myanmar Paiting
Are you looking foraprofessional painting services company in Yangon that is reliable? You are at the right place. CMP (Colorful Myanmar Paints) is here to attend your queries, to clarify your doubts, and provideaone-stop service to complete your painting task you have in mind.
We areaprofessional painting service provider withahistory of excellence. We are experienced, knowledgeable, and professional. Our teams provide measurements, upfront quotations and there is no hidden cost.
The A to Z reliable service provider is here to service your quality project, with the lightning speed. So, call us now to get the "FREE QUOTATION" for your painting needs.
သင်နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆေးသုတ်ရန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရမည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို သင်ရှာဖွေနေပါသလား? သင့်လိုအပ်ချက်များကို ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများဖြင့် သင့်စိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်း အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကျွန်တော်တို့ Colorful Myanmar Paints ရှိနေပါပြီ။
အတွေ့အကြုံရှိဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်သောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လုပ်ငန်းအပ်နှံနိုင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေတို့မျှော်လင့်ပုံဖော်ထားသည့်အတိုင်း မိမိနေထိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှပသေသပ်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ယခုပဲ ကျွန်တော်တို့ ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
There are several reasons why people do house painting. They want their old house makes them feel new again, and they want it to look great. However, making your house look gorgeous requires more thananew coat of paint, but it needs themes, ideas, and color matching concepts. Some might only need their kitchen repainted, while others need the exterior painted and the deck stained.
Servicing house painting with excellence is our privilege. Our team of house painters is excited to help you rediscover the power of color and professional paint in transforming your home, house, apartment’s appearance, look and feel. We will work around your schedule and ensure that you stay informed.
အိမ်ဆေးသုတ်ခြင်းကို ဘာကြောင့်ဆောင်ရွက်ကြသလဲ? အိမ်၊ တိုက်ခန်းများကို တင့်တယ်၍ သစ်လွင်သော အိမ်အဖြစ်ပြန်လည်တွေ့မြင်ချင်ကြလို့ပါပဲ။ မိတ်ဆွေတို့ အိမ်၊ တိုက်ခန်းကို စိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းသော နေထိုင်ရာတစ်ခုဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုလျှင်တော့ စိတ်ကူးရှိရုံနဲ့ မဖြစ်နိုင်။ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရပါမယ်။
ထူးခြားကောင်းမွန်စွာ ဝန်ဆောင်ပေးဖို့က တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပါ။ မိတ်ဆွေတို့ အိမ်၊ တိုက်ခန်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော နေအိမ်တစ်ခုဖြစ်အောင် ဆေးရောင်များဖြင့် တက်ကြွစွာ ရက်ချိန်းအတိုင်း စိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ပြောင်းလဲပေးသွားမှာပါ။
သပ်ရပ်ပြီး မိတ်ဆွေနှစ်သက်တဲ့ဆေးရောင်သုတ်ထားသော အိပ်ခန်းထဲမှာနိုးထလာသည်ကို စိတ်ကူးဖြင့်ပုံဖော်ကြည့်ပါ။ အတွေးအကြုံများစွာဖြင့် ဆေးသုတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သော ကျွန်တော်တို့ CMP (Colorful Myanmar Paints) က မိတ်ဆွေ၏အိမ်မက်ကို အကောင်ထည်ဖော်ပေးသွားမှာပါ။
As an owner of the office orabuilding manager, you will need to choose the right painter for your interior or exterior painting projects. It is an important task to carefully selectapainting service company that you have confidence in the services rendered, and security in the knowledge that the end result constitutesawell-done job.
We take our words to provide professional workmanship, outstanding quality, and no half-way tasks. Our commercial painting services include
Property companies, and more
အဆောက်အဦးပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) အဆောက်အဦးမန်နေဂျာဖြစ်တဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ စီမံကိန်းတွေအတွက်အဆောက်အဦးအတွင်း၊ အပြင် ဆေးသုတ်ရန် လိုအပ်နေပါသလား။ အဆင့်မြင့် အဆောက်အဦးများဆေးသုတ်ရန် ယုံကြည်စိတ်ချသော ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းကို ဂရုတစိုက် ရွေးချယ်ရန်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
CMP (Colorful Myanmar Paints) မှ အချိန်တိုတိုလေးအတွင်း အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်သည်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။ အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Gym နှင့် အားကစားခန်းမများ